Ny Rado Rafalimanana « Aoka isika hanaja hatrany ny fihavanana »
Anisan’ireo nirary soa ny Filoham-pirenena vaovao ny kandidà Ny Rado Rafalimanana.
Amin'ny maha mpandala ny fanajàna ny Fiandrianam-pirenena azy, nilaza izy fa ny didy nivoaka dia tsy azo ivalozana na dia nitaky ny fahamarinana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny halatra isan-karazany aza. Izay no demokrasia misy eto Madagasikara aloha, koa dia hatrehina araka izay ny fanarenana ity tanindrazana iombonana ity, hoy izy. Aoka isika hitandrina hatrany ny fihavanana, ary ny fomba fijery no mety tsy mitovy fa ny samy Malagasy kosa mila manaja ny Fihavanana. Tao anatin'ireny fampielezan-kevitra ireny dia maro ny teny hentitra, masiaka, mahitsy ary maro ireo mpomba ny mpifanandrina no tohana sy tezitra ary nalahelo. Hidintsika ny fonosan'ny fampielezan-kevitra ary hitodika amin'ny fanarenana ny tanindrazana isika ka hiezaka hatrany hampijoro ny firenena vanona feno fahamarinana mba holovain'ny taranaka isika Malagasy, hoy ihany Ny Rado Rafalimanana. Nirary soa ny filoham-pirenena Andry_Nirina_Rajoelina, noho ny fahalaniany hisalotra ny andraikitry ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, ary mirary soa eo amin’ny fiantsorohana ny adidy masina ho an’ny tanindrazana. Mila maka lesona tamin’ny omaly, hanatsarana ny anio ary hampandrosoana ny ampitso, hoy Ny Rado Rafalimanana teo am-pamaranana.